Madaxweyne Farmaajo oo Carmo si weyn loogu soo dhaweeyey – SBC
Madaxweyne Farmaajo oo Carmo si weyn loogu soo dhaweeyey
Carmo[Allsbc.com]-Madaxweynaha Soomaaliya Mudane. Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray degmada Carmo ee Gobolka Bari,halkaasi oo si weyn loogu soo dhoweeyay.
Safarka madaxweynaha oo dhinaca dhulka ah waxaa ku wehlinayey Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali (Gaas),wasiiro iyo xildhibaanno ka kala tirsan golayaasha Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Puntland.
Wafdiga madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa degmada uga sii amba bixi doona magaalada Boosaaso ee xarunta Gobolka Bari,iyadoo haatan shacabka magaalada Boosaaso ay waddooyinka ku sugayaan wefdiga.
Magaalada Bosaaso ayaa lagu arkayaa boorar ay ku xardhan yihiin sawirka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane.Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo Calanka Jamhuuriyadda oo ka babanaya inta badan magaalada.
La soc Allsbc.com insh allah